Ho avy ny maintany : vao mainka ho sahirana ny Jirama | NewsMada
Ho avy ny maintany : vao mainka ho sahirana ny Jirama
Na tsy mbola tena mahery vaika aza, azo antoka fa hitohy ny delestazy afaka fotoana vitsy satria ho avy ny maintany. Tsy misy ny tetibola azo antoka hanarenana ny Jirama, fa mety tsy laharam-pahamehana.
Tapitra ny ririnina! Hiditra ao anatin’ny vanim-potoan’ny maintany isika. Tena misedra olana ny Jirama amin’io fotoana io, satria tsy ho ampy ny tosiky ny rano manodina ny milina manome herinaratra toy ny any Andekaleka, Tsiazompaniry, Mandraka, Mantasoa, Sahanivotry, sns. Vao tsy ela, niaiky ny minisitry ny Angovo, fa efa antitra ny ankamaroan’ny milina ampiasain’ny Jirama. Hatreto aloha, tsy misy ny tetibola mazava, ampiasaina amin’ny fanavaozana azy ireny. Vokatry ny fepetra napetraky ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, tsy maintsy nahenan’ny fanjakana aza ny vola fanampiana, lasa 250 miliara Ar amin’ity taona ity raha 300 miliara Ar tamin’ny taon-dasa. Hanentsemana ny banga na hampihenana ny elanelana amin’ny fatiantok’ ity orinasa ity anefa io. Manampy izany anefa, tsy maintsy nasondrotra 9 hatramin’ny 15% ny faktioran’ny Jirama.
Mitombo ny toky tsy tanteraka
Midika ireo, mety ho mafy ny delestazy afaka volana vitsy, indrindra rehefa tena hiditra ao anatin’ny fotoana tsy mampisy orana (aogositra-novambra). Mitohy ny olana sedrain’ny Jirama, ary saika ahenoana fahasimbana ara-teknika foana matetika, toy ny eny Mandroseza, omaly. Tsy nahavaha ny olana koa ny fisian’ilay orinasa vahiny Symbion power, lazaina fa mbola havaozina ny fifanarahana. Toraka izany koa ilay milina teny Antanandrano nafindra eny Behenjy.
Tsy manan-kavaly sy vahaolana ny fanjakana, na nanome toky sy nanao fanamby aza ny filoha fa ho foana ao anatin’ny telo volana ny delestazy. Miampy ilay tsy fahavitan’ny tanànan’ny frankofonia, ny toky tsy tanteraky ny mpitondra.